Aveiro oo ku taal Portugal: dareenka ah inaad ku jirto Venice yar | Safarka Absolut
Aveiro ee dalka Boortaqiiska
Markaad booqato Aveiro ee Boortaqiiska kama fogaan kartid dareenka ah inaad ku jirto Venice yar. Waxaa ka gudbey saddex kanaal oo ilaa dhowaan loo isticmaali jirey in lagu daabulo caleenta badda iyo cusbada, sidoo kale waxay leedahay xiiso leh dhismaha nouveau art iyo taallo diineed oo kala duwan. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay sidoo kale ku siineysaa animation-ka magaalo jaamacadeed, xeebo aad u fiican iyo raaxada magaalo yar.
Aveiro waxay u jirtaa oo kaliya toddobaatan kilomitir Porto iyo tareen toos ah ayaa mas'uul ka ah isgaarsiinta labada goobood. Tani waxay ka dhigeysaa dalxiisayaal badan oo Porto ah inay ku soo qulqulaan Aveiro gudaha safarada maalinlaha ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, dhammaan tayada magaaladan yar ayaa ka dhigtay mid ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka. waqooyiga Bortuqiiska. Haddii aad rabto inaad ogaato iyada, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad na raacdo booqashadeenna.
1 Taallooyinka Aveiro ee Boortaqiiska
1.1 Fagaaraha Jamhuuriyadda
1.2 Katidralka Aveiro
1.3 Warshaddii hore ee dhoobada dhoobada Jerónimo Pereyra Campos
1.4 Kaniisadda Ciise iyo Matxafka Aveiro
1.5 Matxafka Matxafka Sayniska Nolosha
1.7 Matxafka Vista Alegre
1.8 Xarunta tareenka
1.9 Laydhka Aveiro
1.10 Jardim iyo Rossio
2 Hawlaha lagu qabanayo Aveiro
3 Gastronomy of Aveiro ee Boortaqiiska
4 Cimilada Aveiro
5 Sida loo tago Aveiro ee dalka Portugal
6 Xaqiiqooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsan Aveiro ee dalka Portugal
Taallooyinka Aveiro ee Boortaqiiska
Buundada aasaasiga ah ee Aveiro waa xaafadda Biira Mar, oo leh jidadkeeda cidhiidhiga ah iyo kanaallada lagu qaabeeyey guryaha nouveau art oo leh muuqaal qurux badan, oo si qurux badan loo qurxiyey. Waxaa la dhisay bilawgii qarnigii XNUMXaad muhaajiriin Burtuqiis ah oo soo noqday ka dib markii ay hantidoodii ka heleen Brazil. Laakiin Aveiro waxay leedahay taallooyin kale oo ay ku tusto.
Waa xarunta neerfaha ee xarunta taariikhiga ah ee Aveiro. Waa dhul ballaaran oo magaalo leh dabaq qurux badan iyo meesha aad ka arki karto dhismaha dawladda hoose iyo kaniisada naxariista oo aan goor dhow kaala hadlayno. Waxa kale oo aad ka heli doontaa fagaarahan taallada loo dhisay siyaasiga reer Boortaqiiska Jose Estevao, oo ku dhashay magaaladan.
Qaab dhismeedka farshaxanka
Sidoo kale loo yaqaan kaniisadda Sao Domingos de Aveiro, waxaa la dhisay qarnigii afar iyo tobnaad. Si kastaba ha noqotee, dibedda wixii markaa ka dambeeya mid ka mid ah derbiyada ayaa hadhay, inta hartayna waxaa sabab u ah dib-u-dhiska lagu sameeyay qarnigii XNUMX-aad. Taabadalkeed, gudaha macbadka waxaad ku arki kartaa kuwa caanka ah gothic Cruzeiro ee Sao Domingos, taas oo qayb ka ah dhismaha koowaad. Sidoo kale gudaha gudihiisa waxaa ku jira presbytery-ka casriga casriga ah, koox-kooxeedka baroque, qaar ka mid ah masaajidada habdhismeedka iyo xubin biibiile cajiib ah.
Annaga oo aan ka leexan macbudkan, waxaan helnaa Kaniisada naxariista, Kaniisad yar oo qarnigii XNUMXaad oo leh barxad qurux badan oo Mannerist ah oo lagu qurxiyey dusiyeen. Gudaha, oo leh shamiito badan, xardho iyo rinjiyeyn, ayaa waliba mudan in la booqdo.
Warshaddii hore ee dhoobada dhoobada Jerónimo Pereyra Campos
Muunadani muhiimka ah ee qaabdhismeedka warshadaha waa mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee Aveiro ee dalka Portugal. Iyada facade casaan cas waxaana hada loo adeegsadaa xarun congress iyo goob bandhig.
Kaniisadda Ciise iyo Matxafka Aveiro
Xeritaanka conventual waa dhisme weyn oo qarnigii XNUMX-aad kaas oo walxaha Baroque lagu daray markii dambe. Waxaa ku yaal xabaashii amiirad Santa Joana, gabar uu dhalay Boqorka Bortuqiiska Alfonso V. Laakiin wixii ka sarreeya waa xarunta dhexe ee Matxafka Aveiro, halkaas oo aad ku arki karto shaqooyin fara badan oo farshaxan ah laga soo bilaabo qarniyadii XNUMXaad ilaa XNUMXaad, iyo sidoo kale qoraallo taariikhi ah iyo haraaga qadiimiga ah ee aagga ka jira.
Warshadda dhoobada Jerónimo Pereyra
Matxafka Matxafka Sayniska Nolosha
Wanaagsan tahay inaad booqato adiga iyo carruurtaada, waxay leedahay laba iyo toban qol oo is-dhexgal ah oo loogu talagalay siday u kala horreeyaan robotics, ka biochemistry iyo culuunta kale ee cilmiga. Waxay sidoo kale ku siisaa dhowr bandhigyo joogto ah aad u xiiso badan.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida ay uga shaqeeyeen guryaha milixda Aveiro ee BoortaqiiskaWaad booqan kartaa boggan ku yaal mid ka mid ah oo weli shaqeeya. Waxay sidoo kale u adeegtaa sidii hab lagu ilaaliyo anshaxdan qadiimiga ah ee soo saarista ee lagu dhaqmi jiray ilaa 959.
Matxafka Vista Alegre
La Vista Alegre porcelain Waxay soo saarneyd tan iyo 1824 waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka, iyadoo leh macaamiisha sida Boqoradda Ingiriiska. Aad ugu dhow Aveiro waxaad ku leedahay madxafkan oo aad ku arki karto qaar ka mid ah qaybaha ugu fiican.
Hadaad tareen ku timaadid Aveiro ee Boortaqiiska, layaabka ugu horeeya ee aad kuheli doonto magaalada waa wajiga hore ee istaanka. Sababtoo ah waxaa lagu daboolay wax weyn dusiyeen polychrome in dib loo abuuro muuqaalada gobolka u gaarka ah. Tusaale ahaan, waxqabadka kalluumeysatada, guryaha milixda ama marinka dhexe ee Aveiro.
Waxay ku taal xeebta La Barra, oo aan gadaal ka hadli doonno, waxay soo jiidan doontaa dareenkaaga dhererkiisa awgeed. Xaqiiqdii, waa kan ugu sarreeya dalka Boortaqiiska iyo tan labaad ee ugu sarreysa dhammaan Jasiiradda Iberia. Waxay shaqeyneysay ilaa 1893 nalkeeduna wuxuu gaarayaa 23 mayl badeed.
Jardim iyo Rossio
Waxay ku taal cidhifka marinka Aveiro, waa beer ku habboon inaad nasato ka dib socdaalka magaalada. Dhexdeeda waxaad ku daawan kartaa noocyo muhiim ah oo noocyada dhirta ah iyo aragtiyo qurux badan. Sidoo kale, haddii aad nasiib yar tahay, booqashadaadu waxay la jaanqaadi doontaa mid ka mid ah kuwa badan suuqyada farsamada gacanta lagu qabtay beertan.
Waxaa laga yaabaa in xitaa ka qurux badan tahay tii hore, waxaad ku dhex leedahay dhowr haro oo leh buundooyin qurxin iyo kuwo badan geesaha jacaylka. Waxay kaloo leedahay makhaayad iyo teeraar, iyo sidoo kale miisas iyo kuraas si bilaash ah loogu isticmaalo inay helaan wax ay cunaan. Waxaad sidoo kale geyn kartaa carruurtaada Baixa de Santo Antonio Park, halkaas oo ay ku leeyihiin aag carruurtu leedahay iyo xitaa baarkinka loo yaqaan 'skate park'.
Hawlaha lagu qabanayo Aveiro
Haddii aad booqato Aveiro ee Boortaqiiska, waxaa jira wax ay tahay inaad sameyso iyada oo aan su'aal laga weydiin inaad ku raaxeysato magaalada. Waxay ku saabsan tahay ka jeexitaanka marinkeeda marinnada doomaha duugga ah ee loogu talo galay daabulidda dhirta badda iyo cusbada. Aveirenses ayaa ugu yeera moliceiros waxayna u egyihiin gondolas-ka Venice, in kastoo ay ka waaweyn yihiin.
Waxay leeyihiin laba shaqaale ah, maadaama ay qaadi karaan rakaab ku filan, waxay haystaan ​​qiimo dhaqaale oo ku dhow lix euro. Safarku wuxuu soconayaa 45 daqiiqo wuxuuna daboolayaa saddexda wadiiqo ee Aveiro, wuxuu ku siinayaa aragti kale oo magaalada ah.
Dhanka kale, haddii aad booqato Aveiro xagaaga, waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato inay leedahay laba xeebood. Taasi oo ah Xeebta Cusub waxay u taagan tahay mid gaar ah casinhas às risicas, ciddiyaha guryaha rinji xariijimaha leh, iyo meheradihiisa cuntada guurguura. Isagoo tixraacaya Xeebta Barra, halka uu ku yaal laydhka aan ka hadlaynay, waxaa ku wareegsan hareeraha halka aad ku leedahay baarar iyo maqaaxiyo badan.
Guryo la jeexjeexay
Meelaha ugu horreeya ee xeebahan waa Sao Jacinto Dunes Reserve Nature. Waa qiyaastii sagaal boqol oo hektar oo dabiici ah oo aad ku daawan karto shimbiraha badda ee u gaarka ah, iyo sidoo kale godadka laftiisa, oo ah kuwo cajiib ah. Waa meel kugu habboon inaad sameyso trekking intaad aragto noocyadaas. Wadooyinkiisa, wicitaanku wuu muuqdaa Descoberta da Naturaleza Trilho. Si kastaba ha noqotee, si aad u booqato keydkan dabiiciga ah waa inaad horay u codsataa.
Ugu dambeyntiina, haddii aad rabto inaad dareento garaaca wadnaha dhabta ah ee Aveiro, waa inaad soo martaa Plaza do Peixe. Maalintii, waxaa jira suuq kalluun oo aad u tiro badan, habeenkiina, waa barta fiirsashada ee ardayda inay ka cabbaan inta badan baararka iyo makhaayadaha. Tanina waxay na keenaysaa cunnooyinka caadiga ah ee magaalada Boortaqiiska.
Gastronomy of Aveiro ee Boortaqiiska
In kasta oo ay umuuqato inaan bilaabayno taladeena cunto karinta dhamaadka, waxa ugu caansan Aveiro marka loo eego gastronomy waa macmacaan. Waxay ku saabsan tahay macmacaanka ay ugu yeeraan ugxan sidaha, oo cuntadoodu fudud tahay: ukunta ukunta, sonkorta iyo biyaha.
Sida kalluunka, waa inaad iskudaydaa cod, caadiga ah dhammaan Portugal, laakiin tan Aveiro waxaa lagu diyaariyaa kun siyaabood. Iyo waliba kan ray ee maraqa pitaú, shiil molho la dubay, kala duwan maraqa, shiil eel ama basaska badda la dubay. Ku saabsan hilibka, ka wan jilicsan, kaas oo lagu diyaariyo weel dhoobo ah oo la yiraahdo madow caçoilosiyo doofaarka nuugaya.
Si aad u cabto, waa inaad isku daydaa khamriga caanka ah ee Magacaabista Bairrada ee Asalka. Iyo, macmacaanka dhexdiisa, marka lagu daro mooska ovo, waxaad leedahay xoogaa fiican moofo iyo sidoo kale caloosha, Nooc ka mid ah noocyada loo yaqaan 'crepes' oo ay ka buuxaan malab, shukulaato ama xitaa jiis.
Magaalada Bortuqiiska waxay leedahay cimilo templado, oo celcelis ahaan heer kulkiisu yahay ku dhowaad shan iyo toban digrii. Jiilaalku waa kuwo wacan, oo leh ugu yaraan shan ka badan eber iyo celcelis ahaan ku dhowaad toban. Laakiin sidoo kale waa xilli roobaadka, gaar ahaan bisha Janaayo.
Dhinaceeda, xagaaga waa diiran yihiin laakiin ma kululaan. Celceliska heerkulka bilahaan ayaa qiyaastii ah sagaal iyo toban darajo, uguyaraan shan iyo toban iyo ugu badnaan saddex iyo labaatan. Tirada ugu yar ee roobka waxay dhacdaa bisha Luulyo.
Sidaa darteed, waqtiyada ugu fiican ee aad ku booqan karto Aveiro ee dalka Portugal waa gu'ga iyo xagaaga. Dayrta sidoo kale waa wakhti fiican, laakiin roobab badan ayaa da'a. Iyo, haddii aadan jeclayn uruurinta dalxiisayaasha, way fiicantahay inaad doorato la primavera, tan iyo xagaagii magaaladu waxay qaabishaa soo booqdeyaal badan oo ka yimid gudaha iyo dibedda Bortuqiiska
Sida loo tago Aveiro ee dalka Portugal
Hawada sare ee ugu dhow magaalada Bortuqiiska waa tan Porto. Markaad halkaa gaarto, waad qaadan kartaa metro, kaas oo xarunta ku soo dhaca qiyaastii XNUMX daqiiqo, ama bas, in kastoo kan dambe uu waqti dheer qaato. Kadib, saldhigga Campanha ee Porto way ka baxaan tareen toos ah Aveiro, Socdaalkiisu wuxuu qaadanayaa saacad iyo rubuc. Dhinaceeda, saldhigga magaalada dambe wuxuu qiyaastii shan iyo toban daqiiqo u jiraa bartamaha.
Sidaad arki karto, waa wado ay tahay inaad ku wareejiso dhowr wareejin. Sababtaas awgeed, waxaa laga yaabaa inay kuugu fiicantahay inaad ku tagto Aveiro gaarigaaga qaaska ah ama gaari kiro ah. Intaas waxaa sii dheer, sidan ayaad si xor ah ugu dhex socon kartaa hareeraha.
Haddii aad ka timaaddo bari ama woqooyi, waddada weyn ee magaalada kuu geeysa waa A25, halka hadaad ka safarto koonfurta aad ka dhex gasho A17. Si kastaba ha noqotee, haddii aan ka hadalno gaadiidka waddooyinka, waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad ogaato inay jiraan Khadadka basaska kuwaas oo si toos ah uga yimaada Aveiro magaalooyin kala duwan oo Spain ku yaal. Tani waa kiiska La Coruña, Valladolid ama xitaa Bilbao.
Saldhiga tareenka Aveiro
Dhinaca kale, magaalada Bortuqiiska waa yar tahay. Sidaa awgeed, waad ku sahmin kartaa lug ahaan. Si kastaba ha noqotee, waxaad kaloo leedahay adeeg degmo oo bilaash ah amaah baaskiil, oo caan ku ah bugas. Aveiro waa fidsan tahay sidaa darteed dadaal badan kuguma qaadaneyso inaad baaskiil waddo.
Xaqiiqooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsan Aveiro ee dalka Portugal
Magaalada Bortuqiiska waxay u dabaal degtaa laba xafladood sanadka oo dhan. Bishii Janaayo ee Iiddii San Gonzalito, taas oo abaalmarin siisa badmaaxiinta. Iyo bishii Luulyo, ayaa ciida estuary, oo leh hawlo badan sida tartamada moliceiros iyo cayaaraha gobolka.
Dhanka kale, haddii aad u safarto Aveiro gaarigaaga, waxaad xiiseyneysaa inaad ogaato in wadada weyn ee A25, ee kuu qaadaysa magaalada, ay tahay qadar. Boortaqiiska, kuwan waxaa kaliya lagu bixin karaa kaarka deynta. Laakiin sidoo kale waad iibsan kartaa a kaadhka qadada inay ku iibiyaan goobo badan oo shidaal. Marka ay timaado baarkinka magaalada Boortaqiiska, wax dhibaato ah kuma lahaan doontid banaanka xarunta, halkaasoo lagu nidaamiyo. Dhinaca kale ee qulqulka laakiin sidoo kale u dhow xarunta taariikhiga ah waxaad ku leedahay dhowr baarkinka bilaashka ah.
Dhanka dib u soo celinta, waa inaad ka taxaddartaa cuntada fudud ee aad dhigatid ka hor intaadan cunin. Haddii aadan isku dayin iyaga, waxba ma dhacaan. Laakiin haddii aad sameyso, adiga way kala qaadi doonaan ee qiimaha cuntada. Haddii, sida caadiga ah, ay tahay subag ama saytuun, waa raqiis. Laakiin, haddii taa bedelkeeda ay tahay ham, mar hore ayey qaali noqon doontaa.
Ugu dambeyntii, Boortaqiiska ayaa si buuxda u fahmay Castilian markaa dhib kuma lahaan doontid fahamka naftaada. Si kastaba ha noqotee, waxaan sheegnay ereyo aad xiiseyneyso inaad ogaato, gaar ahaan markaad dalbaneyso baarka. Waxay ugu yeeraan kafee guud ahaan fuudka, laakiin haddii la jaro waa inaad weydiisataa a maroojin. Dhinaceeda, kafeega caanaha leh ayaa ah caano malab. Iyo, haddii aad si sax ah u rabto hal koob oo caano ah oo leh dhibic kafee ah, weydii a galao.
Gabagabadii, Aveiro ee dalka Boortaqiiska Waa magaalo qurux badan oo mudan in la booqdo. Waxay ku siineysaa taalooyin qurux badan, xeebo qurux badan, jawi wanaagsan iyo cunno macaan. Laakiin wax kasta oo ka sarreeya, waxay ku siinaysaa dareenka ah inaad ku jirto Venice yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Aveiro ee dalka Boortaqiiska
Maxaa lagu arkaa Xeebta Amalfi